amazon cyber Muvhuro madhiri aripo izvozvi
Kuru Nhau & Ongororo Amazon Cyber ​​Muvhuro madhiri anowanikwa izvozvi
Amazon Cyber ​​Muvhuro madhiri anowanikwa izvozvi
Nhema Chishanu 2020 iri pano, uye zvinoreva kuti munhu anogona kumhanyisa mune anotyisa tech madhiri uchibhurawuza maAmazon & apos; s hombe pamberi pechitoro. Uye ikozvino sezvo kukurumidza kwekutanga kwapfuura, zvinoreva zvakare kuti vatengi vanofanirwa kunge vari kutsvaga zvimwe zvinotapira zveCyber ​​Muvhuro.
Izvo zvaunopa iwe & apos; zvauchawana pane ino peji zvinochengetwa zviri zvechizvino, saka kana iwe uri kutsvaga kubatirira chimwe chinhu chine mutengo wakanaka, ita shuwa yekutarisa nguva zhinji.
Kana iwe & apos; tichitarisa kukanda mambure akawandisa kuti titore madhiri, isu tinogona kukubatsira iwe nezvazvo futi. Iwo akanakisa iwo akafukidzwa mune edu hombe Nhema Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro inobata chinyorwa , nepo mamwe madhiri chaiwo kubva kuvatengesi vakuru anogona kuwanikwa mune yedu Yakanakisa Tenga Nhema Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro zvibvumirano post, Yakanakisa Walmart Nhema Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro zvibvumirano uye, hongu, isu tine Yakanakisa Target Nhema Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro zvibvumirano naizvo!
Sevha $ 200 pane OnePlus 8 Pro
Iyo inogona kunge isiri iyo yazvino OnePlus foni, asi iyo OnePlus 8 Pro zvirokwazvo ndiyo yekutanga premium OnePlus foni ye2020. Iyo & maapos ndiyo yega ine isina waya kuchaja, semuenzaniso, inofanirwa-kuve chinhu kune vazhinji vashambadziri vashandisi. Ehezve, iyo & apos; s zvakare inodhura OnePlus foni kusvika parizvino. Zvakanaka, ikozvino unogona kuwana iyo 12 + 256GB vhezheni ye $ 200 isingadhuri. Iyo & apos; foni ine simba kwazvo iyo inokushandira zvakanaka kwemakore anouya. OnePlus ine yakakura track rekodhi nesoftware inogadziridza, saka iwe & apos; ungangowana kunakidzwa kanenge maviri mamwe maApple vhezheni.
Sevha $ 150 pane Samsung Galaxy S20 FE 5G
Sevha madhora mazana maviri pane iyo Galaxy S20 5G
Sevha madhora mazana maviri nemazana mashanu paGlass Note 20 Ultra 5G
Sevha 25% paGreen Note 5G
Sevha $ 100 paGalaxy A71
Sevha $ 150 paGPS S10 Lite
Sevha $ 50 paGoogle Pixel 5
Sevha $ 60 pane Samsung Galaxy Watch 3
$ 60 inogona kunge isiri iyo inobhadhara zvakanyanya iwe & apos; yawakaona, iyo isu & maapos; tine chokwadi nazvo. Asi nezve chigadzirwa chakabuda mwedzi mishoma yapfuura, hazvisi izvo zvakaipa. Iyo Galaxy Tarisa 3 ndeye Samsung & apos; s yazvino uye yakakura smartwatch ine epamberi maficha senge ECG uye neropa okisijeni yekuzadza kuyera. Kana iwe & apos uchishandisa nhare yeApple, iyo ndeimwe yeakanakisa mawatchwatches iwe aunogona kuwana izvozvi. Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda, tarisa edu Galaxy Watch 3 ongororo .
Sevha $ 70 paGreen Watch Inoshanda 2 44mm
Sevha $ 50 paFitbit Charge 4
Kana iwe uchingoda wemuviri tracker uye kwete izere-yakazara smartwatch, iyo Fitbit Charge 4 inogona kungova izvo zvauri kutsvaga. Iyo inoratidzira yakatetepa, inogadziriswa dhizaini uye inopa yakavakirwa-mukati GPS, yekurara yekutevera, uye yemoyo ma sensors.
Sevha $ 15 paAmazfit Bip S.
Iyi yaive yatove bhajeti hombe smartwatch uye ndeyekuba zvachose pamutengo mutsva wakaderedzwa. Iyo inoratidzira yakajeka uye yakasununguka dhizaini uye inopa hupenyu hukuru hwebhatiri.
Sevha $ 350 pane Sony Xperia 1
Sony & apos; s 2019 mureza smartphone, iyo Xperia 1, yakanaka kwazvo runhare asi kudzora kwayo kukuru ndiwo mutengo. Zvakanaka, nechibvumirano ichi, dambudziko remutengo rinogadziriswa uye iwe unogona kuwana premium foni pane yakachipa. Kana iwe & apos; uchifarira mudziyo uyu uye uchida kudzidza zvakawanda, tarisa edu Xperia 1 ongororo .
Sevha pane Motorola mafoni
Sevha anodarika madhora makumi manomwe pamoto Moto G
Kana iwe & apos; tichitsvaga kuti utore foni yekuchengetedza kana imwe yemwana wako kana hama yakura, chishandiso cheMoto G chinenge chakakodzera. Ivo & apos; zvakachipa uye zvakavakwa zvakanaka uye zvinoshandira muridzi wazvo zvakangonaka. Kunyangwe sedhiyo huru ivo & maapos; re chaizvo kupfuura zvine mutsindo kunze kwekunge iwe uchitarisira zvishamiso kubva kumakamera kana iko kuita kwemitambo.
Uye, izvozvi, nekuda kweAmazon, unogona kuwana Motorola smartphone kunyange yakachipa. Izvo zviripo zvinopihwa ndezveMoto G Simba uye Moto G7 Play. Mazita anoti zvakaringana nezve imwe nhare yefoni & simba. Iyo G Simba inouya nebhuru rakakura 5,000mAh bhatiri uye iyo G7 Play ndiyo yakachipa pakati pavo, nzira iri pasi pe $ 200.
Sevha madhora mazana matatu pane Motorola Edge
Sevha $ 50 pane Samsung Galaxy Tab A- 10.1 'Hwendefa
Kana iwe & apos; usiri mune Apple ecosystem uye uri kutsvaga piritsi rakachipa rekutarisa zviratidzwa nekuita kubhurawuza uri pamubhedha, iyo Galaxy Tab A isarudzo yakanaka, kunyanya ikozvino nemutengo wayo wakadzikira. Iyo piritsi rinouya ne 1920x1200 pixel kuratidza, Dolby Atmos yakasimbiswa mutauri uye izvo Samsung zvinodaidza 'binge-inokodzera' bhatiri iyo inopa simba rakaringana kusvika anosvika maawa gumi ekutamba vhidhiyo.
Sevha makumi mashanu muzana paSennheiser HD 450BT Bluetooth Wireless Mahedhifoni
Kana Sennheiser ari iwe premium mahedhifoni mugadziri wesarudzo, iwe unogona achiri kuchengetedza imwe mari kutenga kuwana mairi nyowani asina waya mahedhifoni. Iyo HD 450BT yakadzika ne $ 100 parizvino, inova yakanaka yekukanda-kumashure yaunogona kushandisa pane chimwe chinhu. Maawa makumi matatu ehupenyu hwebhatiri anokuchengeta uchifadzwa kuburikidza nenzendo dzakareba uye ANC icharamba ichikanganisa ruzha kure.
Sevha $ 150 paSennheiser PXC 550-II Makaralı Wireless mahedhifoni
Kana iwe & apos; uchitsvaga yakakwira-yekupedzisira Sennheiser mahedhifoni, iwe & apos; re mune mhanza. Iyo Sennheiser PXC 550-II yakadzikiswawo kwenguva yakatarwa ne42%. Navo, iwe & apos; tiri kutora yepamberi NoiseGard Adaptive Noise Kanzura yekunyatso kupatsanuka kubva kunzvimbo yako ine ruzha. Ehezve, iwo madhiraivha ari nani zvirinani zvichikonzera mukuvandudza mimhanzi ruzivo. Pamusoro pezvo, ivo vanouya nekabata-inonzwika kurudyi mukombe iyo inokutendera iwe kudzora vhoriyamu, kutamba uye kumbomira mimhanzi uye kupindura mafoni pasina kuremedza dhizaini nemabhatani.
Chengetedza $ 100 paShure AONIC 50 Makaralı Wireless Mahedhifoni
Shure rimwe zita hombe muindasitiri yekuteerera uye mahedhifoni emakambani & apos; anowanzo kuve kudivi rinodhura. Zvakanaka, izvozvi unogona kusevha 25% pane imwe yeShure & apos; s premium wireless mahedhifoni, iyo AONIC 50. Dhizaini yeaya mahedhifoni ane hungwaru asi saizi yavo yekucheka inokwezva, zvinova zvinobatsira kana kudzosera shure zvichienderana nerudzi rwei zvauri. Izvo zvakafanana kune wese munhu, zvisinei, ihwo-hwemaawa makumi maviri hupenyu hwebhatiri uye iko kurira ruzha kukanzurwa. Zviripachena, iwe unofanirwa zvakare kutarisira kuti kurira kuve kwepamusoro-notch.
Sevha 50% paJBL LIVE 300 Yechokwadi Wireless Mahedhifoni
Kana uchigovana matune ako chisiri & apos; hachisi chinhu chako, pane & apos; kuchiri chigadzirwa cheJBL chaungafunge nezvacho. Iyo JBL Live 300 TW nzeve dzinopa inokudzwa 6-awa nguva yekutamba pane imwechete kubhadharisa, iine mashoma mamwe makesi mune yekutakura kesi. Kana iwe & apos; tichitarisa kuti utore premium isina waya nzeve pazasi pe $ 100, ino ndiyo nguva yekudhonza chikungiso.
Sevha $ 40 paJabra Elite 75t Yechokwadi Wireless Earbuds
Jabra yave kuzivikanwa nemutengo wayo wakanaka wemutengo-ku-mhando uye Jabra Elite 75t havasi izvo. Ivo vane isingazivikanwe dhizaini uye ine ruzha rune simba runofadza munhu wese kunze kweavo vane nzeve dzakanyatsonaka. Jabra Elite 75t inouya nekumisikidza ruzha kukanzura, chinova chinhu chakachengeterwa chikamu cheprimiyamu asi mutengo wavo unonzwisisika, kunyanya izvozvi ne22% dhisikaundi. Unogona kusimuka kusvika maawa 7.5 enguva yekutamba neANC yakadzima uye kana iwe & apos; uchishandisa ANC uye zvese zvinowedzerwa zvemhosva, unogona kusvika kumaawa makumi maviri nemana ehupenyu hwebhatiri.
Sevha $ 60 paSony WF-1000XM3 Yechokwadi Wireless Nzeve
Sony & apos; s epamusoro-e-iyo-waya maearbuds zvakare anoderedzwa kuAmazon izvozvi. Ivo vane pamwe inonyanya kurira ruzha kudzima pakati enzeve, anonyanya kupokana neAirPods Pro. Asi kana iwe & apos; uri mushandisi weApple, iwe & apos; zviri nyore kuti uende kune izvi. Chinhu chakanyanya kudzikira pane izvi saizi, ivo & apos; zvinyowani zvakanyanya zveezeve uye kwete vese vanogona kunzwa vakasununguka kufamba-famba navo munzeve dzavo. Zvimwe kunze kweizvozvo, ivo & maapos; vanoitira shamwari huru yekuteerera.
Sevha $ 40 pane Samsung Galaxy Buds + Yechokwadi Wireless Earbuds
Mamwe mapaundi eakakurumbira earbuds anoderedzwawo paAmazon izvozvi: iyo Samsung Galaxy Buds + . Ipo ivo vachishaya inoshanda ruzha kudzima, vanovhenekera neakawedzera-akareba hupenyu bhatiri. Maawa gumi nerimwe ekuridza nguva pane imwechete mubhadharo chimwe chinhu chingangoita chero mamwe echokwadi ewaya isina waya mahedhiyo anogona kukupa iwe. Nechibvumirano ichi, maBuds + anopa kukosha izvo & apos; s zvakanyanyisa kunaka kupfuudza.
Sevha 18% pane Samsung Galaxy Buds Live
Iwo maBuds Live maSamsung & apos; eazvino echokwadi asina waya nzeve uye anotaridzika seasina vamwe vaviri pamusika. Iwo mabhureki-akaumbwa bhinzi anokwira chinyararire munzeve dzako uye anogona kukupa iwe anosvika maawa mashanu ne5.5 emimhanzi yekutamba nguva pane imwechete kubhadharisa. Izvo & apos; s ine ruzha runoshanda kudzima. Ah, hongu, vane ANC zvakare. Iyo yekuchaja kesi inotsigira isina waya kuchaja kuti iwe ugone kubhadharisa yako Galaxy Buds kuseri kwefoni yako kana ichitsigira inodzosera isina waya yekuchaja, iyo inonyanya kukwirira-magumo mafoni mafoni. Izvozvi, unogona kuzvitenga uye chengetedza $ 30.
Sevha $ 50 paAmazon Echo Buds Chokwadi Pasina waya Nzeve
Mamwe maBuds asi aya akatosiyana. Aya maAmazon & apos; avo vechokwadi vasina waya nzeve uye ivo & apos; izvozvi zvava pasi ne38%, zvichiita kuti zvive zvakachipa. Ivo vanozokutorera iwe kusvika maawa mashanu ekutamba nguva pane imwechete mubhadharo uye, zvakasikwa, vanokutendera iwe kuraira Amazon & apos; s Alexa izwi mubatsiri. Kana iwe & apos; wagadzirisa imba yako kare, wadii kuwedzera ecosystem kunzeve dzako?
Sevha 50% paEcho Ratidza 5
Sevha 55% paEcho Dot (4th Gen) + Amazon Smart Plug
Sevha makumi matatu muzana paRin'i Vhoriyamu bhero 3
Sevha 30% Moto TV Inonamira ne Alexa Voice Remote
Sevha makumi mana nemasere muzana paAmazon Echo Dot
Tichiri & apos; tichiri pamusoro wenyaya yezvigadzirwa zveAmazon, isu tinogona zvakare kukupa zano kune imwe Echo chishandiso. Iyo Echo Dot idiki, yakanaka smartphone mutauri iyo iwe yaunogona kushandisa kune ese marudzi ezvinhu, kubva pakuteerera kumumhanzi kuti uwane mamiriro ekunze mushumo uye nhau mangwanani. Izvo zvakachipa zvakachipa kutanga nazvo asi ikozvino zviri & apos; zvadzika kusvika pamutengo unenge usingadzivisike. Kana iwe & apos; zvaita zvakanaka nekuva nematauri akachenjera mumba mako, iyo Echo Dot ichafara kubatsira kuwedzera kuvapo kwemubatsiri wezwi.
Sevha $ 700 paSAMSUNG 75-inch QLED 4K Smart TV
Kana iwe & apos; tichitarisa kukwidziridza yako huru TV, iyi 75-inch QLED Smart TV kubva kuSamsung inofanirwa chose kufunga. Iyo ine toni yetekinoroji yakavakirwa mukati mayo, kusanganisira iyo AI processor iyo inokwidza zvemukati ku4K uye 120Hz yekuvandudza-chiyero chakapetwa ne Samsung & apos; s Motion Rate 240 modhi iyo inoderedza kufamba kwekufamba kana uchiona inomhanya-mhanya mitambo kana mafirimu. Kwenhambo pfupi yenguva, unogona kusevha chinenge chetatu chemutengo wepakutanga weTV, saka usazofunga nezvazvo kwenguva refu kana kuti ungarasikirwa neichi chikuru.
Sevha $ 120 paTCL 40-inch 1080p Smart LED ROKU TV
Hongu, zvakaoma kutenda asi 1080p maTV achiri chinhu muna 2020. Iyi inogona kunge isiri iyo yakanakisa sarudzo yako yekutandarira imba yemitambo setup, asi isu tinopokana kuti gogo vako vanozofunga kana TV yavo isiri & apos; t 4K. Kana iwe uchida kupa mumwe munhu terevhizheni-yakakura saizi asingashandise yakawanda, iyi 40-inch modhi kubva kuTCL isarudzo yakanaka, kunyanya izvozvi maapos ayo akaderedzwa ne40%.
Sevha madhora mazana matatu paVIZIO Home Theatre Sound System
Ruzha rune simba chikamu chikuru che chiitiko chekuona bhaisikopo uye iyi Vizio Dolby Atmos ruzha system iwe & apos; uchanzwa senge iwe & apos; tiri pakati chaipo pechiito. Ehe, mabara eruzha haapi & echokwadi kupa akakomberedza ruzivo rwevatauri vanopararira vakatenderedza mukamuri rako, asi ivo & apos; zviri nyore kwazvo kuisa uye kupa iyo imba kutarisa kwakachena. Iyo yakatsaurirwa sub-woofer inogona kuiswa mukona yeiyo yekuwedzera oompf. Iye zvino, unogona kusevha inopfuura 30% pane ino premium soundbar.
Sevha $ 190 paSamsung Soundbar ine 3D Yakakomberedza Ruzha
Kana iwe usingade kusanganisa uye kuenzanisa mhando uye TV yako ichibva kuSamsung, saka iyi Samsung Soundbar ichaita yakakura kuwedzera kune yako yekutandarira setup. Iyo bharari ine 7 vatauri vanoshanda pamwe chete kukupa iwe yakatenderedza ruzha ruzivo uye pane & apos; s isina waya sub-woofer yeaine simba lows. Iyo Soundbar inotsigira Bluetooth yakawanda-chishandiso chekubatanidza, kuti iwe ugone kuishandisa nyore seBluetooth mutauri uye ridza mimhanzi kubva kufoni yako. Parizvino, iyo Samsung HW-T650 3.1ch Soundbar yakadzikiswa neinosvika 50%, izvo zvinoita kuti ive mubhadharo unobhadhara.
Sevha $ 50 paGoPro HERO8 Nhema
GoPro yakaita chiito makamera akakurumbira uye ari kwese kwese. Zvinotaridza senge mazuva ano munhu wese ane GoPro zvisinei nekuti mangani ma adventures akakosha kutora firimu ravainaro. Kana iwe ukave uri mumwe wevashoma vasina GoPro mune yavo zvombo, ikozvino unogona kuchengetedza imwe mari kana uchitenga yapfuura HERO8 modhi. Iyo ine yakanakisa vhidhiyo kugadzikana, inova yakanyanya kunaka kukosha kwechero chiito kamera. Iyo & apos; haina mvura, saka hapana & apos; hapana chikonzero cheakawedzera makesi machena kuti igare yakachengeteka.
Sevha 38% kana zvimwe paRazer keyboard, mbeva kana headset
Kana iwe waive wakamirira Nhema Chishanu kuti uvandudze yako PC zvigadzirwa, iwe wakaita sarudzo yakanaka. Razer ine zvikwereti zvakakura pazvinhu zvitatu izvo zvinonyanya kukosha kuti uve neruzivo rwekutamba.
Isu tinotanga neRazer BlackWidow Elite Mechanical Gaming Khibhodi. Mechanical keyboards, kunyanya kubva kumakambani ezita rezita, anowanzo kuve anodhura, asi iyo BlackWidow yave pasi ne50% paAmazon. Ehezve, iyo keyboard ine yakazara RGB mwenje iyo iwe yaunogona kugadzirisa sezvaunoona zvakakodzera. Iyo dhisikaundi ndeye chete yegirini michina switch, asi izvo zvinoita senge inonyanya kufarirwa sarudzo zvakadaro. Iwe haugone & apos; t kunge uchizunza Razer keyboard usingashandisi zvakare Razer mbeva. Zvakanaka, zviri pachena kuti unokwanisa, asi hazvinzwike chaizvo. Zvisinei, mutengo weRazer & apos; s Viper mbeva inodonhedzwa ne50%. Iyo mbeva ine 16,000dpi sensor, ambidextrous dhizaini, RGB mwenje uye akawanda mabhatani akarongeka kuti iwe ugone kuita zvakawanda neruoko rwako rwerudyi. Uye pakupedzisira, isu tine Razer Kraken yemitambo yemitambo. Iyo & apos; yakaderedzwa ne 'chete' 38% iyo ichiri chibvumirano chakanaka Iwe unowana yakanaka hombe pamusoro-iyo-nzeve makapu ane akapfava padding anotsigira 7.1 chiteshi yakatenderedza ruzha rwekunyudza zvizere, micheka inodzoserwa uye isina uremu furemu. Kwete zvimwe zvakawanda zvaunogona kuda kubva kuhedhifoni. Kunze kweRGB, ndiko kuti, icho chigadzirwa cheRazer chisipo asi isu & maapos; tine chokwadi chekuti unogona kurarama usina.
Sevha $ 80 pa eufy naAnker Robot Vacuum Cleaner
Hongu, pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda, Anker anogadzirawo vachenesa marobhoti. Uye sezvakaita zvimwe zvese zvigadzirwa zveAnker, zvinokwanisika pasina kukanganiswa nehunhu. Uye chibvumirano ichi chinoita kuti chive chakachipa, zvichideredza mutengo ne35%. Une maawa asingasviki makumi maviri nemana ekuti utore mukana nazvo, saka kana iwe uchida kuti mubatsiri wemarobhoti atenderedze nekuchenesa apo ichitandadza / kutyisidzira zvipfuwo zvako panguva imwe chete, saka zvirinani kuti uite nekukurumidza.
Sevha $ 100 paCanon PowerShot G7X Maka III Kamera
Kana iwe & apos; uchitsvaga kupinda munzvimbo yekuvlogga asi yako kamera kamera haigure, Canon yakagadzira chimwe chinhu chete icho chinodiwa. Iyi vlogging kamera inogona kupfura mu4K uye inopa yakamira mufananidzo kudzikama. Inogona zvakare kushandiswa pakuraramisa kwepamoyo. Ah, uye, chokwadika, unogona kutora mifananidzo nayo. Uyezve, ine inotonhorera-inotaridzika dhizaini dhizaini. Makomputa akatsaurwa makamera senge iwo ave niche chigadzirwa, asi kana iwe & apos; uchitsvaga kuti utore imwe, unogona zvakare kuchengetedza imwe mari.
Sevha madhora mazana mashanu paCanon EOS 6D Maka II Muviri
Zvino izvo & apos; s yakakomba kamera. Kubva pane vanofarira mafoto kuenda kune nyanzvi, iyo EOS 6D Maka II chishandiso chinokwana zvakawanda zvinodiwa. Iyo ine 26.2 Megapixel yakazara furemu CMOS sensor yakavharirwa mukati memuviri wakaomeswa ine 3-inch kuratidza yekushandisa zvirinani kwemenyu uye kupfura furemu. Parizvino, Amazon ine pasi ne28% asi yemuviri chete. Kana iwe usina & maapuro akakodzera kare, iwe & apos; uchafanirwa kushandisa zvakati wandei usati watanga kupfura.
Sevha madhora makumi manomwe patanhatu pane Wireless Security Outdoor Camera
Kusvetukira kune imwe imwe mhando yekamera. Kuva nekuchengeteka makamera inogara iri zano rakanaka asi havazi vese vanodisa kuboora uye nzira tambo kuti ubatsirwe nazvo. Iyi khamera inogadzirisa iyi nyaya nekuve ne solar panel uye bhatiri kuti irambe ichifamba husiku. Iyo vhidhiyo chiratidzo inogona kutapurirana kuburikidza neWi-Fi kana kurekodwa pane-pane-bhodhi SD kadhi. Chokwadi, hazvisi chaizvo zvakanyatsojeka, asi izvo & apos; chibayiro iwe & apos; chichafanira kuitisa kuti zvive nyore.
Sevha 32% paRin'i A19 Smart LED Bulb, 2-pack
Smart bulbs ari nyore. Unogona kuvadzima kana kudzima kubva pafoni yako kana kunyangwe nekuudza wako mubatsiri wezwi kuti akuitire iwe. Uyezve, haufanire kunge uri pamba, saka kana iwe ukaenda kure kwevhiki, unogona kuvaita kuti vabatidze husiku kuti vape fungidziro yekuti mumwe munhu ari pamba uye kudzivirira kuba. Dambudziko nderekuti dzinogona kunge dzichidhura, asi neiyi dhisikaundi, mutengo unonyanya kutsungirira. Rutivi rwepazasi nderekuti idzi aren & apos; t RGB, saka haina nzvimbo yakawanda yekuvhenekera kwemanzwiro, asi iwe uchiri kukwanisa kugadzirisa kupenya.
Sevha $ 250 pane Samsung Galaxy Book S
Kana iwe & apos; uchitsvaga chimwe chinhu chakachipa kupfuura iyo Surface Pro X, Samsung & apos; s yeGlass Book S chikumbiro chinokwezva. Iyo & apos; diki yakatetepa uye yakareruka Laptop ine hukuru hupenyu hwebhatiri uye aluminium chassis yekuvandudza kugadzikana uye chimiro. Iine Microsoft & apos; s Yangu nhare mbozha, iyo Galaxy Book S inoshanduka kuwedzeredza ye smartphone yako, kunyanya kana iyo & apos; sa Galaxy futi, Samsung yanga ichishanda pamwe neMicrosoft kuunza vashandisi veApple Apple-senge nhanho dzekubatanidza pakati pefoni nefoni .
Sevha madhora mazana maviri pane ASUS ZenBook Duo UX481 14 ”Laptop
Iyo ZenBook Duo yakanaka yakasarudzika Laptop. Iyo haina imwe, asi maviri ekuratidzira, yechipiri yakaiswa pamusoro pekhibhodi. Chidzitiro chechipiri chinokutendera kuti uwedzere kugadzirwa kwako uye nekuita kuti hupenyu hwako huve nyore nekugovana mamwe maturusi ako ezuva nezuva kwairi uye uve nezvakawanda zvechivhariso zvivakwa zve software yako huru. Laptop yacho inofambiswa neIntel & apos; s Core i7 10510U processor yakarongedzwa ne8GB ye RAM uye 512GB yeNVME yekuchengetedza. Iyo keyboard uye trackpad dhizaini haina kujairika asi kana iwe uchikwanisa kushandisa zvakanaka kuratidzwa kwechipiri, izvo & apos; chibayiro chakakodzera kugadzirwa.
Sevha 25% paRoundance Laptop Mira
Kana iwe & apos; tichishandisa zvakare laptop yako sedesktop pabasa kazhinji kazhinji kwete, kumira senge ino ndiko kuwedzera kukuru kune yako setup. Zvisinei kana iwe & apos; tichishandisa rekunze yekutarisa kana kuti kwete, kuve nelaptop yakakwidziridzwa kune zvakawanda zvakanaka. Kutanga, zvinowedzera ergonomic, uchifunga kuti une yakasarudzika keyboard. Chechipiri, inobvumira kuti laptop yako itonhorere pachayo zvirinani. Chechitatu, inochengetedza nzvimbo padhesiki, nekuti iwe unogona kuchengeta zvinhu pasi pe laptop. Uye chechina, inodzivirira yako laptop kubva pangozi yekudonha kwemvura, kofi kana zvimwe zvinwiwa zvaunogona kunge uchinwa kana kuzvitenderedza. Iko kuvakwa kwesitendi iyi kwakasimba kwazvo uye kunogona kubata zvakaringana chero laptop, zvisinei saizi.
Sevha 56% paOLEBR 3-in-1 Yekucha Mira
Chimwezve chigadziko, ichi chaireva kubhadharisa matatu eApple zvishandiso kamwechete. Unogona kuisa iPhone, Apple Watch uye AirPods Pro yekuchaja kesi pachigadziko ichi uye woita kuti vese vabhadharise munzvimbo yakarongeka. Iko hakuna majaja akasanganisirwa mune ino sitendi, saka iwe & apos; uchafanira kufambisa iwo aunotova nawo. Iyo chete yekubatsira ndeye yakagadziridzwa aesthetics yedhesiki rako kana husiku kumira. Zvakadaro, mutengo weiyi stand hausi wakakwirira chaizvo uye ikozvino iwo & apos; akatodzika kupfuura zvakajairwa nekuda kweichi kutanga kweChishanu Chishanu chibvumirano.
Chii Chishanu Chishanu chinotarisira kutarisira paAmazon
Ndichiri pamberi pevashambadzi vepamhepo vaizvipatsanura kubva kuzvitoro zvepanyama nekupa zvitapuro paCyber ​​Muvhuro, Muvhuro mushure meChishanu Chishanu, ikozvino, ivo & apos; vari kunyatso kudhizaina, nemadhiri anowanikwa mumazuva ese maviri uye, chokwadika, pakati nepamberi peizvozvo naizvo. Chaizvoizvo, iyo & apos; mwaka wese wekuchengetedza.
Gore rino haifanire & apos; kuve rakasiyana kwazvo kupfuura gore rapfuura (zvirinani mune izvo), nemadhora makuru pane mamwe emagetsi emagetsi anozivikanwa. Zvakaita se:
Iyo pricier chinhu, chakakura dhisikaundi chaunogona kutarisira. Zvakajairika zvisiri-Nhema Chishanu zvidzikisira zvinowanzo kuve zvakapoteredza 20%, saka chero chinhu chinosvika makumi mashanu kubva muzana kana kudarika chinhu chikuru. Ramba uchifunga kuti vamwe vatengesi vechitatu-bato kuAmazon vanogona kukwira mitengo zvisati zvaitika kuitira kuti madema eChishanu Chishanu ataridzike zvirinani pane zvavari chaizvo.
Kana iwe uchitova nezvirongwa zvekutenga chaiko, unogona kuisa mabhukumaka izvo zvinhu uye kucherechedza mitengo yacho, pamwe kutozadza pepa rekuparadzira neruzivo rwese mune imwe nzvimbo. Nenzira iyi, iwe & apos; muchakwanisa kuita nekukurumidza uye muve nezano rakanaka kana madhiri acho achinyatso kukosha. Izvo zvinobatsirawo nekuzvidzora kwako kwekushushikana kana iwe uchinzwa senge iwe ungangotenga chinhu iwe chausingade & apos; chaicho chaunoda kana chaunoda.
Ramba uine ziso kunze kweMheni Mitauro. Izvo zvinowanzo kupa zvikwereti zvakakura asi zvinongopedza maawa mashoma kana kudzamara stock yapera.
Sechiyeuchidzo, Nhema Chishanu gore rino rinowira munaNovember 27, saka kana iwe & apos; uronga kuenda kunotenga zvekutenga, ita shuwa kuti iwe & apos; vagadzirira panguva iyoyo.
ndiyo iphone 12 inokosha
10 mitambo yemhando yepamusoro seClash of Clans kune ese iwe kuvaka kwepasirese, mauto anoraira vanofarira vakawanda.
Smartwatch prototype inoshandura ruoko rwako kuita yekubata
T-Mobile inotangisa zvisingaenderane ne5G mapurani efoni emabhizimusi madiki